Nizeria: miakatra hatrany ny vidin-tsolika ao aminy | NewsMada
Be mponina indrindra aty Afrika i Nizeria, manodidina ny 200 tapitrisa; mpamokatra solika be indrindra, 2,5 tapitrisa barils isan’andro, mbola maharitra 50 taona amin’ny fitrandrahana azy ankehitriny izao. Anisan’ny mahantra indrindra ihany koa anefa. Amin’izany fisian’ny solika betsaka indrindra izany, vao niakatra 15 % indray ny vidiny amin’izao fiatrehana ny fiantraikan’ny Covid-19 izao. Tsy afaka manampy intsony eo amin’ny vidiny ny governemanta. Very hevitra tanteraka ny mahantra maro anisa, mangetaheta ambonin’ny lakana.
Tao anatin’ny iray volana, nitombo avo roa heny ny vidin-tsolika, ny mahantra ihany no mizaka ny vokany, ny manan-karena, tsy mihetsi-bolomaso amin’izany, raha ny nambaran’ireo miaramila mpiambina toby fivarotan-tsolika any an-toerana. Mitotongana hatrany ny toekarena any Nizeria, tafiditra lalina anaty fahantrana miaraka amin’izany ny ankamaroan’ny mponina.
Raha ny fanadihadian’ireo teknisianina, mbola hiakatra hatrany ny vidin-tsolika hanentsenan’ireo kaompania vaventy mpitrandraka ny fatiantoka nahazo azy nandritra ny fihibohana. Miakatra avokoa ny vidin-javatra any Nizeria, anisan’izany ny vidin’ny herinaratra, nitombo 100 %. Voatery nanala mpiasa ny orinasa maro, hatramin’ny fanjakana. Tsy rariny intsony izao, hoy ny vahoaka nizerianina, nefa tsy afa-manoatra.